I-Illinois Cannabis News ngeChillinois neCannaKweens - Ukubambezeleka Ngini
I-Illinois Cannabis News ngeChillinois
Izindaba ze-Illinois cannabis zinhlobo ye-limbo khona manje. Abaningi balindele ukuzwa eMnyangweni Wezolimo ukuthi izicelo zabo zamalayisense ziyokwamukelwa noma cha. UJustine Warnick noCole Preston kusuka Ama-Cannakweens futhi Chillinois uhlanganyele nathi ukuthola isibuyekezo sezindaba zase-Illinois.
Bukela isiqephu ku-YouTube noma ulalele i-podcast lapha:
ISIQONDISO ESIQALILE: Umnyango wezoLimo e-Illinois - I-Cannabis yabadala
Ibhalwe ngu: Simona
I-cannabis e-Illinois isetshenziswe ngenkuthalo amashumishumi eminyaka. Kodwa-ke, kusukela ngo-2014 kuphela, insangu yaba semthethweni e-Illinois. Kade kungokomthetho ukusetshenziswa kwezokwelapha, kepha isimo sashintsha ngokuphelele kulo nyaka ngonyaka ka-2020 lapho i-cannabis ibhaliswa ngokusemthethweni ngezinjongo zokuzijabulisa.
Kusho ukuthini lokhu kubantu abahlala e-Illinois? Njengoba silindele imiklomelo, amabhizinisi amaningi kanye namathuba wokusebenzisa ukuzilibazisa avelayo, futhi kuze kube manje, singabona ukuthi imboni ikhula kanjani njalo.
Enye yama-podcasts athandwa kakhulu e-Illinois ngokusiza abantu ukuthola indlela yabo embonini Umbukiso, eChillinois. UJustine Warnick noCole Preston bangabathandi bezindaba zensangu abafuna ukusakaza izwi ngokusetshenziswa kwensangu ngenkathi bebika ngomkhakha we-cannabis esifundazweni sase-Illinois.
I-Illinois Cannabis News
E-Illinois, kukhona cishe ama-62 dispensaries, futhi kuze kube manje izintela zifinyelela ku amakhulu ayizigidi ezingama-52 zamaRandi ngenzuzo. Sisenendawo yokuthuthuka embonini, ikakhulukazi ngoba kunamalayisense angama-110 angabhekela abathuthukisi abakhona.
Abatshali be-Marijuana e-Illinois abakwenzi njengoba abanye kufanele bakulindele, kodwa lokhu kuba yinkinga okwamanje lapho sibona ukuthi, e-Illinois, insangu inezimpande ezijulile. Imelela iphuzu elinamandla lokuthi kube semthethweni nokutshala jikelele.
Okwamanje, iChillington isiza imboni ukuthola indlela yabathengi abadinga insangu njalo nsuku zonke. Ukusetshenziswa kwabadala nokwenziwa kwezomthetho kushintshe umbono wabathengi abaningi insangu e-Illinois.
ICannaKweens yinkampani egxile emcimbini esiza abantu ukuthi badale ama-cannabis infusions kanye ne-edibles, esiza iningi labasebenzisi be-cannabis ukudala isikhala lapho bangafika bathathe izeluleko ezifanele. Umcabango ophambili ukuhlomisa abesifazane ukuthi babe yingxenye yomphakathi we-cannabis lapho bangasho khona umbono wabo futhi babe yingxenye yebhizinisi eliholwa kakhulu ngabesilisa.
Manje imboni iya ngokuya ibhekelwa kwabesifazane. Inikeza izisombululo kubantu besifazane abakhona ukuze babelane ngokuhlangenwe nakho kwabo nge-cannabis, lapho izindlela ezahlukene zokusebenzisa zibamba iqhaza elibalulekile emiphumeleni yensangu kithi.
Imiphumela ayigcini ngokwengqondo nangokomzimba. Sithola nethonya le-cannabis elingokwenhlalo ngokwengeziwe. Manje, ukunikwa amandla kwabesifazane kubaluleke kakhulu kunanoma yini enye, futhi kulapho iCannaKweens ikhanya khona. Bakha isikhala lapho abalandeli beqiniso be-cannabis bengabuthana futhi babelane ngemicabango yabo ejwayelekile yokusebenzisa insangu.
IChillington neCannaKweens Bahlangana Kanjani
Chillinois futhi amaCannaKweens ahlangana ukuze enze ukusetshenziswa kwe-cannabis e-Illinois kuvulwe ngokwengeziwe. Njengoba sazi, i-cannabis ayikho emthethweni ezifundweni eziningi, futhi imithetho eminingi isavusa umcabango wokuthi insangu yindaba yomsebenzi ongekho emthethweni.
Sidinga ingxoxo ethe xaxa mayelana nama-cannabis e-Illinois nakwamanye amazwe. Kungakho abantu abavela eChillinois benze iseshini ejwayelekile yokubhema lapho abasebenzisi be-cannabis bangafika ukubona ukuthi ikusasa le-cannabis likhona e-Illinois.
Amaseshini omusi we-Virtual aba yinto yangoko Chillinois.net nezinsizakalo zalo. Kukhona futhi izinketho zokuzibandakanya nabasebenzisi be-cannabis ngezikhathi ezihlukile. Wonke umuntu wamukelekile ukuba yingxenye yezikhathi ze-inthanethi ezithuthukisa futhi zibandakanye ngenkuthalo zonke izici zokusebenzisa insangu. Kuhlala njalo kukhona umuntu oku-intanethi, futhi ukusakaza kwenzelwe ukuletha okungcono kakhulu ezinhlelweni zentuthu bukhoma online.
Joyina iChillington neCannaKweens ukuthola izindaba ezingaphezulu ze-Illinois ezisuselwa kubasebenzisi besikhathi sangempela nendlela yabo yokuqhubekisela phambili kumaphoyiseni we-cannabis.